yokufunda Ibanga - lokhu ingenye standard izinhlobo ukuqeqeshwa. Ngesikhathi esifanayo, kuba ngezinga elithile elikhethekile futhi ihluke kwezinye izinhlobo zemfundo, ngoba kude engabondli abakubo ukuxhumana ngqo phakathi umfundi nothisha, kuthatha indawo kude nge-Internet nokunye ukuxhumana. yokufunda Ibanga ingakwazi umuntu, kubandakanya abafundi, abafundi kanye nothisha abafisa uqeqeshe noma ukuthuthukisa amakhono abo.
Okwavelela yokufunda ibanga wukuthi awudingi ukushintsha indlela komkhuba ukuphila futhi bachitha isikhathi esiningi behambela prosizhivanie okungukuthi ekhaya lakho. Ikhwalithi yefundo ibanga kuncike ngqo kubafundi belandisa. Indima othisha ukuthi zaziyoba yizinto futhi ukuqapha inqubo yokufunda.
Ukufundela kwenteka ngekutsi bafundzi okuthiwa amakolishi virtual, amanyuvesi, izikhungo ngogesi zemfundo. Njengoba amanyuvesi bendabuko amayunithi virtual neminyango.
Lapho efundisa izinkulumo evulekile asetshenziswa ezikoleni virtual, okokufundisa virtual, izindlela zokuxhumana, umklamo kanye yokumodela.
yokufunda Ibanga kungenziwa ihlelwe izindlela ezihlukahlukene, ngokwesibonelo izifundo zangaphandle, basuke kuvame kakhulu ukuba kusetshenziswe i-labo abafundi abangakwazi ukuya kuyo yonke izinkulumo ngenxa umndeni noma umsebenzi. Ngako-ke tindlela amakhosi umfundi okokusebenza ekhaya, futhi ngemva kokulahlekelwa uthisha wakhe. Ngesisekelo ukuqeqeshwa yelwati ngesisekelo eyunivesithi ethile kungenzeka ngesikhathi esifanayo kungenziwa exhunywe kwi-izincwadi uhlelo lokufundisa futhi akude.
Ngenxa base ezibanzi izinhlelo ezihlukahlukene multimedia futhi ugijimela ibanga imfundo edidiyelwe, lokhu imfundo kusiza kokubili abafundi kanye nabantu abadala bahlanganise ukuyoqhubeka nezifundo zabo.
Kwenzeka ukuthi izingane zesikole abakwazi abaya ezikoleni ezivamile ngenxa isimo sezempilo, bese, amanyuvesi kamuva, nokunye-ke, futhi, futhi, ukusiza yokufunda ibanga kuyagcwaliseka ngaso sonke isikhathi.
Kukhona izinto eziningi ezinikeza imfundo ibanga. Kuyinto non-interactive, okuhlanganisa ezihlukahlukene ephrintiwe izinto, alalelwayo video izinto; amathuluzi ikhompyutha, okuhlanganisa zonke izinhlobo tutorials inthanethi, e-izincwadi, ukuhlolwa nezilawuli; video umhlangano, okuyizinto wokuxhumana kwezinto ezilalelwayo nezibukelwayo iziteshi.
yokufunda Ibanga kungenxa mediamodeley olulodwa, kanye ngokusebenzisa hypermedia multimedia amathuluzi. Kuye kukhethwa zokudluliswa kwezinto kusho kungaba eyodwa noma kuziteshi eziningana. Lokhu kuqeqesha, njengoba panacea ngoba bonke labo abafisa ukuba bathole ulwazi, kodwa akakwazi agqashule ekusebenzelaneni ekhaya noma emsebenzini. Yiqiniso, ukufunda ngokusebenzisa hypermedia luyoqina ngokwengeziwe, ngendlela ecacile neqondakalayo.
izihloko ezihlobene isihloko yokufunda ibanga kanye imincintiswano nezethulo electronic.
Uthisha Social esikoleni yanoma yimuphi umfundi uzothola usizo
Spring Break nezindlela yokuhlela umfundi ezokungcebeleka
Heater - lena kudivayisi okukhulu Ukushisa!
Mitsubishi l200 Izibuyekezo
Izibonelo isazela. Self-ukulondolozwa, indlala, okusinda
Izincomo sendlela wean ingane ebulawa
Honda Fit: Izibuyekezo
Izinhlobo Zasendulo Zesiqinisekiso
Dream wesifazane - amabele ngokuqinile!
Indlela ukupheka Shake amaprotheni ekhaya